प्रदेश सरकारले काम गरेर बलियो भएको देखाउँदैछ– मुख्यमन्त्री
१४ भाद्र, २०७५ | News
बुटवल, भदौ १४ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिकरण गरी प्रदेशको समृद्धिको प्रस्थान विन्दु तय गरिने बताउनुभएको छ ।
“हाम्रो रणनीति भनेको कृषिको व्यवसायिक विकास गरी कृषिमा रहेका बहुसंख्यकलाई बाहिर निकाल्ने हो । र, गैरकृषि क्षेत्रमा लगााउने हो–उहाँले भन्नुभयो–“कृषिको व्यवसायिक विकास गर्न सक्दामात्रै कृषिमा लागेको ठूलो हिस्सालाई बाहिर निकाल्न सकिदैंन् ।”
प्रदेश–५ को आवधिक योजना ०७६।०७७–०८०।०८१ तर्जुमा सम्बन्धी पूर्वतयारी गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिको आशनबाट बोल्दै उहाले प्रदेशको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पर्यटन भएको बताउनु भयो ।
उहाले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई सगैं र प्रतिस्पर्धी ढंगले अघि बढाउन सक्दा विकास प्रभावकारी हुन सक्ने बताउनुभयो । “सार्वजनिक क्षेत्रले पनि निजी क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्छ, निजी क्षेत्रले पनि सार्वजनिक पूँजीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ, त्यसो गर्दा विकास प्रभावकारी हुन्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले पूर्णरुपमा काम गर्न थाल्दा नागरिकले प्रदेश सरकार शक्तिशाली भएको अनुभूति गर्ने बताउनुभयो । “प्रदेश सरकार कमजोर होइन्, काम गर्न शुरु गर्दैछ । दुई वर्षपछि नेपालको संघीयतामा प्रदेश नै जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने प्रमुख सरकार भएको पुष्टि हुने छ–उहाँले भन्नुभयो ।
यो प्रदेशको समृद्धिबाट नै राष्ट बनाउने दृष्टिकोणका साथ काम भइरहेको मुख्यमन्त्रीले बताउनु भयो । मुलुकमा लामो कालखण्ड अधिकारको लडाईंमा बितेको बताउँदै उहाँले अब अधिकारको लडाईं सकिएकोले समृद्धिको बाटोमा लाग्ने दिन आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“ संविधानमा अधिकारका विभिन्न सूचीहरु छन्,अधिकारका ती सूचीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई काम गर्न दिनुपर्छ, काम गर्न खोज्दा वातावरण खल्वलाउने काम गर्नुहुँदैन्–उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले योजना कोठामा बसेर पनि तयार गर्न सकिने तर साझा मनोविज्ञान तयार गर्न नसकिने बताउनुभयो । “यसरी छलफल गरेर योजना निर्माण गर्दा साझा मनोविज्ञान तयार हुन्छ,पूर्व तयारी गोष्ठी गर्दाका अपेक्षा भन्दा बढी उत्साह मिलेको छ ।
राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कण्डेलले योजना निर्माणको तयारीमा यो प्रदेश अगाडि रहेको बताउनु भयो । “केही प्रदेशले योजना आयोग नै नबनाएका छैनन्, बनाएकाहरुले पनि भर्खर काम थाल्दैछन् । यो प्रदेश आवधिक योजना निर्माणका साथै अरु काममा धेरै अघि बढेको पाइयो”–उहाँले भन्नुयभो । प्रदेश योजना आयोगलाई राष्टिय योजना आयोग आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले छलफलको अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रमुख सचिव डा. तिर्थ ढकालले योजना दस्तावेज विषयवस्तु मात्रै महत्वपूर्ण नभएर प्रक्रिया पनि महत्वपूर्ण भएकाले योजना तर्जुमा पूर्व तयारी गोष्ठी आयोजना गरेको बताउनु भयो । गोष्ठीमा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । ।